Chii Chinoita Kuti Imba Ive Yakanaka-Ishamwari
Chii Chinofanira Kutora Pet-Friendly Hotel Kuitira Iwe & Imbwa Yako kana Cat?
Iko "Pet-Friendly" Yenyu Izvo Zvichaita Kuti Uve Wakanaka-Shamwari Here?
Gemini mhepo inogamuchirwa nevashanyi vepamhuka kune hotera yeDelano Las Vegas. © MGM Resorts International
Zvechokwadi Pet Pet-Friendly Hotels Itai Kuti Iwe nePetro yako Mufarire Kamuri Dzako
Zvakawanda zvedu mahotera ehotera yepahotera tinoda hoteli yekamuri yemagetsi - hotera yakagadzikana nedzi kana hotera-yakanaka-hotera - kuitira kugadzirisa imwe, nhengo inokosha yemhuri.
Tinoenderera mberi tichitarisira kuti purogiramu yedu yekodhi-yakagadzikana inotendeseka ndeyechokwadi uye inogamuchirwa. Imwe hotera yakagadzikana yemhuka:
Hazvina kukodzera kuve nehanya ne "nguva imwechete yekuchengetedza imba" - dzimwe nguva yakakwirira se $ 250 - pamagetsi ekupa vaeni.
Imwe hotera yakagadzikana yepaguru haibhadhara mari yepamusoro yezvokudya zvemazuva ose , iyo inogona kuva $ 100 + pamari, uye dzimwe nguva pamusoro pekuchengetedza imba.
Imwe hotera yakagadzikana yepaguru haibatsiri mamiriro ekudzivirira pamhuka yako kana kuti kwauri. (Inowanzoita mutemo wakadaro: kuti haugoni kusiya chipfuwo chako pachako muimba yako, uye inofanira kubhadhara nekubhadhara petter-sitter yehotera. Chimwe chido: kuti mhuka inochengetwa mumutakuri wayo apo uri kunze kwekamuri.)
Hazvikuparadzanisi kubva kune vasati vashanyi vekugara, uye kumba iwe muhotera ye "Siberia." (Pane imwe nzvimbo yeFlorida Keys, nzvimbo dzakagadzikana dzepaguru dzine mabheji mana kubva kuhotera huru).
Hazviti kutonhora kubatwa pamakati, uye kubvumira imbwa chete.
Uye mahotera akakwirira-anobatsira ... ihotera dzinoda mhuka dzakawanda kwazvo, dzine yavo! Onai mhuka dzinofadza makumi maviri nemasere dziri muSiteresi maIndaneti dzine Mhuka dzekufambisa .
Zvichazoitika: ungawana sei paradhiso yehotera kune yako uye yako furry shamwari
Nzira Yokuverenga Pakati PeMitsara & Tsvaga Ichokwadi Pet Pet Friendly Hotel
Mingus uye Violet vanodzokorora vaenzi paLealer Phillips Hotel vane rudo mucheche muMontreal. © Karen Tina Harrison
Nzira dzakasiyana-siyana dzekuwana Imwe Pet-Friendly Hotel
Kana iwe uchiita chikoro chekuchikoro, iwe nemhuka dzako dzemhuka muchagovera zororo rakanaka.
Imwe: Chiedza-uye-chechokwadi chinokanganisa kero yehotera. Enda nehotera yehotera iyo yakagadzirisa kuzvipira kwechokwadi chekugara-hukama. Maikirwo ehotera anotevera anogamuchira mhuka dzinochengetedzeka nemazamu akazaruka (pasina mvumo yekuchengetedza imba; mitemo isingabvumirwi; uye pane imwe yemari yemari isingadariki $ 25): Westin Hotels (vanotarisira mutsoropodzi Westin Heavenly Bed);
Loews Hotels (tarisira chimiro, ndinoreva goodie, bhegi ye pooch yako); Kimpton Hotels nehanzvadzi dzechikwata Monaco nePalomar Hotels (vanoisa mitemo kana zvikwereti zvezvipfuwo, uye vanopa zvinhu zvakadai sevakagadziriswa uye vanoita basa).
Zvimwe zviviri: Tsvaga Webhu. Tarisa mitsara dzakasiyana-siyana dzepaIndaneti (uye mapurogiramu emafaira) emahotera ane ushamwari.
Zvimwe zvinongova mapuraneti emapurisa emakashamba, asi mamwe, akadai sajjettpets.com, anounza mashoko chaiwo.
Zvitatu: Tsvaga purogiramu yemhuka nekudana hotera. Hazvina mhosva kuti chii chaunounganidza kubva pawebsite yepahotera kana muInternet directory, iwe unofanirwa kuwana chokwadi pamusoro pehotera yekodzero yemagetsi. Zvose zvaunoda kuita ndodana hoteli uye ukumbira tsanangudzo pamusoro pemutemo wavo wemhuka. Chii chaunofanira kubvunza pamusoro pazvo: maitiro avo ose ekupomera imba; pet-in-room zvibvumirano; uye nzvimbo yemakamuri emakamuri.
Zvadaro: sangana nenyanzvi yenyika pamusoro pemhuka yekufamba (uye muridzi wayo)
Kwokuenda Kwakanakisisa Kwenhamba Kwenharaunda Mazano
Kelly E. Carter naLucy Carter weThejetsetpets.com paThe Ritz-Carlton Laguna Niguel mu Southern Southern California. © Regina DiMartino
Tine Dzimwe Mukati-Pet Pet Travel Advisors ...
Mugwagwa-murwi anotsvaira seMingus nekatsinho-rekutsvaga katsi seVilet (inoratidzwa peji yapfuura) ziziva chikamu. Asi Chihuahua Long-Haired wekuzivana kwedu ndeyekare inofambisa uye nemaonero enyika.
Zita rake ndiRucy Carter, uye ari pedyo naKelly E. Carter, nheyo yeThejetsetpets.com. Vose pamwe chete, Lucy naKelly (vakaratidzwa pamusoro apa) vanofamba nenyika vachitenderana nevashambadzi vepasipoti, vachiuya nemazano ekunze kune vanofambira zvakanaka ... uye varidzi vavo.
"Kufamba nemhuka dzemhuka ndeimwe yezvikwata zvinokurumidza kukura zvezvenyika yose," anodaro Kelly. "Hotels, airways, uye mamwe mabhizimisi ebasa anogamuchira mhuka dzemhuka dziri mumba mangu Nguva yasvika. Mhuri dzedu dziri mhuri."
(Zvinosuruvarisa kuti Lucy Carter akapera muna 2014. Rudo rwake rwehupenyu, uye rwekufamba, rwakasunungura munhu wese akasangana naye Lucy nhaka yake: upenyu huri nani mumugwagwa wevanoda shamwari dzedu dzinodiwa.)
Zvadaro: Ona mapikicha edu emahotera akakwirira-akakodzera
Vamwe veVatinoda Pet-Friendly Hotels
Santa Fe's Eldorado Hotel inogamuchirwa zvikuru-mhuka: imbwa uye makatiwo anogamuchirwa nebhadharo rezuva nezuva. © Heritage Hotels & Resorts
Pasi, Iyi Ndiyo (& Zvese Zedu) Fave North America Hotels
• Seasons Four Hotel Baltimore : miswe yemuguta rekare
• Dupont Circle Hotel muDDC: nhare ye canines
• Turnberry Isle Miami: yeBerzer & Meowzer
• The Point Relais & Chateaux , nechepamusoro kweNew York: iyo nyika yose-yakabatanidzwa is pet-inclusive
• Fairmont Miramar Hotel & Bungalows muSanta Monica, LA: hapana chekubhadhara mhuka dzemhuka, nguva dzose
• Wickaninnish Inn kuVancouver Island : zuva rega rega imbwa zuva
10 Mazano eBhidhiyo paPriceline Hotels
Mifananidzo yeIndonesia del Coronado
The 9 Best Cusco Hotels of 2018
Imwe yepamusoro yebhadhati yeCape Cod Hotels ye 2018
The 9 Best Brussels Hotels of 2018
Inonyanya kudikanwa muRoma kuGreatal Hotels muUnited States
Disney Dream Interiors uye Indoor Common Areas
Zvinhu Zvokuda Kuti Uzviite muHawaii
Kugadzirira Kuonga Kuva Kwekutenda Kudya muReno
Top 13 Zvinhu Zvokuita Downtown Austin
Kefalonia - Kunaka Kwemhando uye Nyaya Inonetsa
Zuva raamai paNew York City
Makumi 10 Akanakisisa Makungwa muRhode Island
Ocean City, Maryland Kufamba Nevashanya Kutungamira
Summer Positions for Albuquerque Teens
Arkansas '4 Yakanakisisa Zvokudya Zvokufambira